Goob Joogeyaashii Caalamiga ahaa oo Amaanay hanaankii ay u dhacday Doorashadii deegaanku | Somaliland.Org
Goob Joogeyaashii Caalamiga ahaa oo Amaanay hanaankii ay u dhacday Doorashadii deegaanku
November 29, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Goobjoogayaasha caalamiga ah ee dusha kala socday qaabkii u qabsoontay doorashadii golaha Deegaanka ee Somaliland ayaa shir jaraa’id oo ay maanta Hargeysa ku qabteen ku soo bandhigay warbixin hor dhac ah oo ay kaga hadleen hanaankii ay doorashadaasi u dhacday.
Kormeerayaashan caalamiga ah oo ka kala socday sideed iyo Toban wadan ayaa sheegay inay u suuro gashay inay booqdaan 20% goobahii codbixinta indhahoodana ay ku arkayeen sida ay doorashadu u socoto.
Kormeerayashu waxay shir jaraa’idkooda ku sheegeen inay fursad u heleen inay lugahooda ku tagaan 15 Degmo oo ka mid ah 21-ka Degmo ee ay ka dhacaysay codbixintu.
Xidhiidhiyaha kormeerayaasha Steve Kibble ayaa waxuu halkaa ka caddeeyey in doorashadii Golaha deegaanku ay u qabsoontay qaab xasiloon oo waafaqsan nadaamka laga doonayey inay u dhacdo doorasho nooceeda ah, waxana ammaan u jeediyey gudiyada Doorashada ee Heer qaran, Heer Gobol, Heer Degmo iyo Heer Goob Doorasho sidii ay ugu dhabar adaygeen hawsha baaxadda lahayd.
Xidhiidhiyaha Kormeerayaasha caalamiga ah ee Doorashooyinka Somaliland waxa uu sheegay in shir saxaafadeedka kama dambayska ah ee ay kaga warami doonaan doorashada ay kormeerayaashu qaban doonaan maalinta Sabtida ah ee soo beegan.
Previous PostA shout of personal interest rather then national one is nonsense and childishNext PostFaysal Cali Waraabe oo sas iyo Rajo beel ka muujiyay hanaankii doorashadu u qabsoontay	Blog